जीवनको एनिमेशन - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
- महेश तिमल्सिना
आश्विन १७, २०७५
पल शाह नेपाली चलचित्रका स्थापित अभिनेता हुन् । २०४६ सालमा दाङको रामपुरमा जन्मिएका शाहको बाल्यकाल दाङमै बित्यो । बाल्यकालमा चकचके स्वभावका शाह गुच्चा तथा पौडीका सौखिन थिए । उनी स्कुल जान खासै मान्दैनथे । उनलाई सुरु–सुरुका दिनमा स्कुलमा टिक्नै गाह्रो भयो । युकेजी पढ्दाताकाको क्षण सम्झँदै पल भन्छन्— युकेजीमा पढ्दा स्कुलबाट धेरै पटक भागेको थाहा पाएपछि एक दिन बुबा र प्रिन्सिपलले पिट्नु पनि भयो । त्यसपछि भाग्न छाडें । पढाइमा त्यति ध्यान नदिए पनि पल कक्षामा प्राय: पहिलो–दोस्रो भैरहन्थे । ०६० सालमा शाहले द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे ।
एसएलसीपछि उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएर सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकायमा भर्ना भए । कुन विषय लिएर अध्ययन गर्दा के हुन्छ भन्ने ज्ञान नभएका शाहले त्यति बेला बैंकर्स बन्ने सपना बुनेका थिए । त्यति बेला उनी दिदीको कोठामा बस्थे । दिदीको एउटा मात्र कोठा अनि आफ्नो पनि कमाइ नभएकाले पललाई त्यहाँ बस्न अप्ठेरो लाग्न थाल्यो । त्यसपछि उनी जागिरको खोजीमा लागे । यही क्रममा सानीआमाका छोरा नितिन चन्दले उनलाई अडियो–भिडियो एडिटिङ सिक्न सुझाव दिए । उनले एक वर्षजति एडिटिङ सिके । त्यसपछि उनलाई चन्दले नै गायक विष्णु देवकोटाको स्काई इन्टरटेनमेन्टमा काम लगाइदिए ।
आईकममा अध्ययनरत रहँदै त्यो काम पाउँदा पलले अब मेरो भविष्य यसमै बित्छ, बल्ल लाइफ सेटल भयो भन्ने सोचेका थिए, तर उनको त्यो सोच धेरै दिन टिक्न सकेन । उनले स्काईमा काम सुरु गरेको केही महिनापछि देशमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन चर्कियो । त्यस क्रममा धेरै दिन कफ्र्यु लाग्दा पल काममा जान सकेनन् । उनी करिब १० दिनपछि काममा जाँदा कार्यालयमा ताला लागेको देखे । उनले त्यो बेलासम्म तलब पाएका थिएनन्, जसले गर्दा आर्थिक संकट र डिप्रेसनमा समेत पुगेको पल बताउँछन् । त्यसपछि उनी फेरि भौंतारिएर हिँड्न थाले । यही क्रममा उनलाई नितिनले नै तनाव नलिनु, म जागिर खोजिदिन्छु भनेर आश्वासन दिए ।
अन्तत: उनलाई नितिनले अनामनगर पूर्वी गेटस्थित मनोज पाण्डेको मिडिया प्लसमा एडिटरको काम मिलाइदिए । त्यति बेला पलको उमेर १७ वर्ष मात्र थियो । उनले त्यहाँ ६ महिना काम गरेपछि मात्र तलब पाउन थाले । आफूले सुरुमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब पाएको पल बताउँछन् । मिडिया प्लसमा करिब ५ वर्ष काम गरेपछि उनले सगरमाथा टेलिभिजनमा काम गरे । सगरमाथा टेलिभिजनमा एडिटरका रूपमा काम गरेपछि उनलाई तराई टिभीबाट अफर आयो । त्यहाँ पनि केही समय काम गरेपछि उनी आफूलाई थप परिपक्व बनाउने उद्देश्यले एनिमेसनसम्बन्धी अध्ययनका लागि दिल्ली पुगे ।
उक्त कोर्स सकिएपछि उनी नेपाल फर्केर तराई टिभीमा एनिमेटरका रूपमा काम गर्न थाले । त्यति बेला उनले २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । काम गरेको एक वर्षपछि तराई टिभीको आन्तरिक विवादका कारण उनले करिब ७ महिना पारिश्रमिक पाएनन् । त्यति बेला उनलाई मोटरसाइकलको किस्ता र कोठाभाडा तिर्नसमेत धौ–धौ परेको थियो । समयमा घरभाडा तिर्न नसक्दा धेरै पटक घरबेटीको कटाक्ष सुन्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै पल भन्छन्— घरभाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले हामीलाई घरबाटै निकालिदिए । त्यसपछि उनले शान्तिनगरकै अर्को घरमा एउटा सानो कोठा लिए । अहिले पनि पहिलेको त्यो घरको बाटो हिँड्दा आफूलाई निकै रिस उठ्ने पल बताउँछन् ।
त्यतिबेलासम्म पलले अभिनेता हुन्छु भन्ने कल्पनासम्म गरेका थिएनन्, तर परिस्थिति फरक हुँदै गयो । एडिटर र एनिमेटरका रूपमा काम गर्ने क्रममा उनी सेल्फी भिडियोसमेत बनाउँथे । त्यो बेला अहिलेको जस्तो सूचना–प्रविधिको विकास भैनसकेकाले ती भिडियोलाई ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्युटरमा राखेर साथीहरूलाई देखाउने पल बताउँछन् । उनका ती भिडियो हेरेपछि साथीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्थे । त्यसले उनलाई थप हौसला प्रदान गथ्र्यो । यही क्रममा उनलाई विज्ञान राईको निर्देशन रहने ‘तिम्रो यादमा रम्छु’ गीतमा अभिनयका लागि अफर आयो । उक्त भिडियोले खासै चर्चा त पाएन, तर उनी केही दर्शकमाझ चिनिए । त्यो बेला आफूलाई अभिनय गर्न नआउने र अहिलेसम्म पनि अभिनयसम्बन्धी कुनै तालिम नलिएको पल बताउँछन् । पल भन्छन्— मैले सुटिङस्पटबाटै आफूलाई निखार्दै लगेँ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
लाटी पुतलीको फड्को
त्यसपछि पलको ध्यान अभिनयले तान्न थाल्यो । यही क्रममा उनले सुनिल गिरीको ‘को होला त्यो आँखा जुधाउने’ गीतमा अभिनय गरे । त्यो गीत भाइरल भयो । त्यही गीतले उनलाई अभिनय क्षेत्रमा स्थापित गरायो । उक्त गीतमा अभिनय गरेको तीन महिनापछि पलले ‘हेल्लो हनि–बनि’ गीतमा अभिनय गर्ने अवसर पाए । लगातार दुई गीतका भिडियोले पललाई यो क्षेत्रमा स्थापित हुन सघायो । उनले अभिनय बापत पारिश्रमिकसमेत प्राप्त गर्न थाले । अभिनयमा दुई वर्ष बिताएपछि पललाई एक दिन निर्देशक मुस्कान ढकालको फोन आयो । पल भन्छन्— मैले मुस्कान दाइलाई भेटेँ, उहाँले मलाई सीधै ‘नाइँ नभन्नु ल–४’ मा अभिनयका लागि अफर गर्नुभयो । चलचित्रमा अभिनय गर्ने अफर आए पनि त्यो बेलासम्म चलचित्रमा अभिनय गर्ने कुनै सोच नभएको पल बताउँछन् । तैपनि उनी मुस्कानलाई भेट्न गए । त्यहाँ उनले चलचित्रका निर्माता विकास आचार्यसँग पनि भेटे । त्यसपछि मुस्कान र वसन्तले उनलाई स्क्रिन टेस्टका लागि बोलाए ।
स्क्रिन टेस्ट भएको सात दिनपछि उनले चलचित्रका लागि छनौट भएको सूचना पाए । त्यसपछि उक्त चलचित्रको सुटिङ सुरु भयो । पलले चलचित्रमा निर्वाह गर्नुपर्ने चरित्रमा डुबेर अभिनय गरे । सुरु–सुरुमा चलचित्रमा अभिनय गर्न धेरै गाह्रो भएको अनुभव पल सुनाउँछन् । पल भन्छन्— चलचित्र अभिनयको विषयमा केही ज्ञान थिएन, तर नाइँ नभन्नु ल–४ बाट मैले धेरै कुरा सिकेँ । नाइँ नभन्नु ल–४ व्यवसायिक रूपमा सफल भएपछि त्यसले पललाई सर्वत्र चिनायो । ‘नाइँ नभन्नु ल–४’ बाट पलले नव अभिनेताको एवार्डसमेत प्राप्त गरे । त्यो एवार्ड लिँदा आँखाबाट आँसु बर्सिएको पल सम्झन्छन् । त्यसपछि उनलाई विभिन्न चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोहरूबाट अफर आउन थाल्यो । उनले अहिलेसम्म म यस्तो गीत गाउँछु, जोनी जेन्टलमेन, शत्रुगते आदि चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
घरभाडा तिर्न नसकेर घरबेटीबाट निकालिएका पल अहिले शान्तिनगरकै एउटा फ्ल्याटमा आरामदायक ढंगले बस्छन् । उनी चलचित्रबाट पनि राम्रो पारिश्रमिक लिन्छन् । पलले अहिले एउटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेबापत ९० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गरेका छन् ।
प्रकाशित :आश्विन १७, २०७५
साइन्स गु्रपबाट अडिसनमा छानिएँ
क्यान्सर जीवनको अमूल्य अनुभव : मनिषा कोइराला
रेडियोमा यात्रा जीवनको
उमेरको अंक र जीवनको तरंग
फेसन शोमा देखाईयो समुद्री जीवनको अवस्था
जीवनको अर्को अध्याय सुरु भएको छ
गुमनाम छ अन्नपूर्ण प्रथम जेष्ठ ३१, २०७६
पदयात्राका लागि खुम्बुका गन्तव्य जेष्ठ ३०, २०७६
चर्चामा नआएका कीर्तिमानी आरोही ‘मिङतेम्वा’ जेष्ठ २९, २०७६
सगरमाथाको साख घट्दैछ जेष्ठ २७, २०७६
दरबार हत्याकाण्ड प्रत्यक्षदर्शीले के देखेका थिए ? जेष्ठ १९, २०७६
स्ट्यान्डअप कमेडीवाला जेष्ठ १५, २०७६
मिस नेपालको आलोचना, विरोध, धर्नाजस्ता गतिविधि किन हुन छाड्यो ? जेष्ठ ६, २०७६
राम्रो गरेर जित्ने कुरामा विश्वास गर्छु जेष्ठ ५, २०७६
सिल्भर जुब्ली संस्करणको मिस नेपाल जेष्ठ ४, २०७६
प्रदीप–अनमोल साइलेन्ट ब्याटल जेष्ठ १, २०७६